Naafto - Wikipedia
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qodobkaan, eeg Shidaalka dabiiciga ah.
Naafto (ingiriis: Diesel) waa waa shidaal dareere ah oo ka mid ah kheyraadka dabiiciga ah, markey qaydhiintahay leh midab huruud ilaa madoow ah, kana samaysan isku dhisyo haydarokaarboon ah, oo laga helo oogada dhulka hoosteeda.
Naaftadu wuxuu ka mid yahay saliida dabiiciga ee dhulka, waxuuna soo baxa marka la sifeeyo shidaalka.
Naaftada oo ka mid ah Shidaalka ayaa wuxuu ka samaysmay markii tiro badan oo noole dhintay ah - u badan dhir iyo algea - ku aasmeen dhagaxa sedimentary hoostiisa, halkaas oo cadaadis iyo kul badan ku helay malaayiin sano ka hor.
Guud ahaan, naaftada waxaa loo isticmaalaa in la quudiyo aaladaha makaaniga ee shidaalka ku shaqeeya, sida warshadaha, gaadiidk, tareenada iwm.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Naafto&oldid=150687"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Diseembar 2015, marka ee eheed 01:13.